Double Rainbow Zvinoreva MuBhaibheriSymbolize & kukosha - Zvinoreva Zvemubhaibheri
iphone nhema screen ine kurodha denderedzwa
sei kubatidza vakafa iphone
kuchinja sei apuro wachi bhatiri
chitoro cheapp hachizobatana
Zvinoreva iyo muraraungu wakapetwa uye mashiripiti ayo .
Muraraungu chinhu chekupenya uye chezvemamiriro ekunze chinoparadzanisa mwenje wezuva muchimiro chayo, uye kana zuva rikaramba richipenya, rinopenya mumadonhwe emvura.
Iyo multicolored arc ine tsvuku kunze uye violet mukati.
Kurongeka kwakazara kwemavara kutsvuku, orenji, yero, girini, bhuruu, indigo uye violet.
Zita rayo rinobva mungano dzechiGiriki, umo Iris aive mwarikadzi aishanda semuziviriri waMwari.
Muraraungu une zvirevo zvakawanda mutsika zhinji, fanano huru ndeyekuti inogara yakabatana nevamwari.
Mu YechiKristu Bhaibheri , muraraungu wakasikwa mudenga saiye vimbiso yekuti Mwari haazomboite mafashama zvakare .
Mutsika yechiYoruba, murarabungu unomiririrwawo semutumwa waMwari kuvanhu vari mumufananidzo wemwari Oxumare .
MuBurma muraraungu mweya une njodzi, muIndia huta hwemiseve yemwari inopfurwa.
Muzvinyorwa zveNordic muraraungu ndiyo bhiriji rakavakwa naOdin kubva kuMidgard.
MuRoma yekare, muraraungu waive nguwo ine mavara eIsis, maneja waJuno.
Nhanho yekuona muraraungu inogona kutapurirwa muchipere, maminetsi mashoma mushure mekuzviona.
Kana iwe uchida kuzviita iwe uchichiona, uye panguva ino fungidzira ichi chishuwo, ramba uchifunga nezve kusvika kune iyo nzvimbo inogona kuita yako mashiripiti, nemakenduru, zvinonhuwira, kristaro uye kuperetera.
Asi usambonongedzera chigunwe chako kune muraraungu zvakananga nekuti iyo inotevera mvura ichave yako.
MuIreland, chero munhu anoona muraraungu uye akabata pasi anowana hupfumi hwavo, hari yavo yegoridhe.
Muraraungu mangwanani zvinoreva kuwanda kwemvura mukati mezuva, asi murarabungu unoonekwa pakupera kwezuva zvinoreva kuti mvura yaenda.
Zvidimbu zvidiki zvemuraraungu zvinowoneka mudenga rine makore dzimwe nguva zvinoreva kuti mudutu rinotevera, zvikumbiro zvako zvichazadzikiswa.
Kana muraraungu ukanyangarika nekukasira, mamiriro ekunze akanaka ari munzira, nerudowo.
Muraraungu unowanzoreva kuti mwaka wemvura wave kuda kupera.
Asi kune magnomes, muraraungu ndiyo nguva yakakodzera yekuita zvikumbiro uye kuita zvemashiripiti. Uye padyo nepauri pauri, rombo rakanaka raunenge uine.
Kune varoyi muraraungu kurota, uye zvinobatsira kuisa simba pane zvitsinga zvakanaka.
Chii chinonzi muraraungu muBhaibheri
Mushure memafashama, Noa akasiya areka, uye Jehovha akasimbisa hukama naye. Chiratidzo chinoonekwa cheichi chibvumirano ndiRainbow. Rugwaro runoisa mazwi aya pamiromo yaMwari: Ichi ndicho chiratidzo chesungano yandinoita newe uye nevese vanogara newe, kwemazera ese: Ndichaisa uta hwangu kudenga, sechiratidzo chesungano yangu nenyika uye ndicharangarira sungano yangu newe uye mhuka dzese, uye mafashama haazoparadze vapenyu zvakare (Mavambo 9: 12-15) . Izvi zvinorevei?
Apo nyika mbiri dzenyika dzekare, mushure mehondo refu, dzakasvika murunyararo; mambo weguta rega rega akaisa arc yayo yehondo padenga reimba yechigaro. Nekudaro, uta hwacho hwakaratidza kuti nyika dzese dzakauya murunyararo. VaIsraeri pavakaona muraraungu mudenga, vakafunga, vachifananidza, kuti hwaive uta hwaMwari.
Nenzira iyoyo, ivo vakanzwisisa kuti Ishe aive akaturika uta hwake mumakore uye akasimbisa runyararo rwekupedzisira nevanhu vake uye neVanhu vese.
Ruzivo rwaYahwe saMwari ari murunyararo nevanhu vake ndeimwe yehunhu hwechitendero chevaIsraeri. Vanhu vekare vaitya Mwari. Vaifunga nezvaMwari sekunge nemhandu nemhandu. Pane kudaro, kuna Israeri, Mwari mumwe munhu anopa runyararo uye anosimbisa mubatanidzwa nevanhu vake uye nepasi rose kurichengetedza.
Sungano yaMwari haina kuganhurirwa kuna Israeri; inovhara vanhu vese, mhuka nepasi rose. Zvese chokwadi zviri mumaoko aMwari, asi kwete kuti zviparadze, asi kuti zvipe rugare uye kuvimba. Muraraungu ndiyo chiratidzo cherunyararo mubatanidzwa uyo unogadzwa naMwari nezvisikwa zvake zvese.
KUNAPI KUNOTENYA KUNE MUBHAIBHERI?
Isu tinowanzo kuwana zvinyorwa zvakawanda pamusoro pemuraraungu mubhaibheri uye toona hukama hwayo hwakajeka nemafashama uye tinofungidzira Noa ari mugomo remafuro manyoro nemhuri yake kwakatenderedza uye se CHIRATIDZO (kwete) muraraungu wakanaka murondedzero.
Zvakanaka, kupfuura izvi, izwi ARC iris ine kukosha kwakanyanya; seKubwinya kwaMwari Wekumusoro-soro. Pasina chero mhinduro, ngatitarisei pane zvakapusa zvinoreva kuti muraraungu chii uye zvinomiririra muShoko raMwari. Unozotonga kukosha kwazvo.
Muraraungu chinhu chinoitika kana mwenje uri kure uchidarika nemuviri wemvura uri muchimiro chemvura, chiutsi kana mhute. Zvichienderana nekona iyo ray yechiedza inopfuura nepadonhwe remvura, mavara akasiyana anoratidzwa muchimiro chehafu vhiri.
Mushure memafashama Mwari akaudza Noa kuti muraraungu waizoshanda sechiratidzo chekurangarira kuti hakuchazovizve nemafashama emvura ekuparadza nyama yose ( Genesisi 9: 9-17 ), Mwari ndokuti: Ichi chiratidzo chesungano yandinoita pakati pako neni nechisikwa chose chipenyu chinewe, kwemazana emakore asingaperi: Uta hwangu ndakaisa mumakore, chinova chiratidzo chesungano pakati pangu nenyika. Uye zvichaitika kuti kana ini ndichiunza makore pamusoro penyika, uta hwangu huchaonekwa mumumvuri. Uye ndicharangarira sungano yangu iri pakati pako neni nechisikwa chose chipenyu chenyama. uye hakuchazove nemafashama emvura kuparadza nyama dzese.
Sekureva kwaEexquiel, sekunge murarabungu unotarisa mumakore unoita kunge musi unonaya, saizvozvowo chitarisiko nezvekupenya… kwechimiro chekubwinya kwaJehovha ( Ezekieri 1.28 ), uye ndikaona chitarisiko chakaita sendarira inopenya, chakanga chakaita somoto mukati maro, kubva padivi rehudyu yake zvichikwira; uye kubva muhudyu make pasi, ndakaona kuti raitaridzika kunge moto uye kuti raive nekupenya kwakatenderedza. Kufanana nekutaridzika kwemuraraungu mumakore pamvura inonaya, ndizvo zvakaita kutarisa kwechiedza kwakatenderedza.
Johane akaona akakomberedza chigaro cheushe, murarabungu nengirozi ine muraraungu pamusoro pemusoro wayo ( Zvakazarurwa 4: 3; 10: 1 ). Kuonekwa kweaive akagara kwaive kwakafanana nedombo rejaspa nekarineri, uye chakakomberedza chigaro cheushe paive nemurarabungu wakafanana pakuonekwa neemaradhi ndakaona imwe ngirozi yakasimba ichiburuka kubva kudenga, yakaputirwa mugore, iine muraraungu pamusoro pemusoro wayo. Chiso chake chakange chakaita sezuva netsoka dzake kunge mbiru dzemoto.
Naizvo. Kwete chete muraraungu unotumidzwa zita munaGenesisi asi mune mamwe mativi eShoko raMwari. Icho hachisi chiratidzo chechisungo chete asi chehukuru neKubwinya; Sechokwadi chinoshamisira vamweVanarabhiratidza kuti muraraungu uri munzira yakatsauka wakananga pasi, semurwi anodzikisa uta hwake paanomira kuushandisa, chinova chiratidzo cherunyararo uye anotsanangura mumaonero akezvinoreva zvemweyaizvo zvinonakidza kwazvo.
Chii Chinomirira Turtle MumuBhaibheri?
CHIPROFITA ​​CHINANGWA CHE Hove MUBHAIBHERI
Nhamba 23 Zvinoreva MuBhaibheri
Chiporofita Zvinoreva Zvemombe MuBhaibheri
KUSHANDURA PAMWEYA SHIRI MUBHAIBHERI